Faah-faahin ku aadan Shirkii Kismaayo dadka dega iyo wefdigii dawladda federaalka Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Faah-faahin ku aadan Shirkii Kismaayo dadka dega iyo wefdigii dawladda federaalka Soomaaliya
Faah-faahin ku aadan Shirkii Kismaayo dadka dega iyo wefdigii dawladda federaalka Soomaaliya
December 29, 2012 - By: Hanad Askar
Waxaa maalintii shalay shir isugu yimid wefdi ka socdey dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka kooban Wasiiro, saraakiil iyo Isimo iyo odoyaal ay iska soo xuleen dadka dega gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, waxaa kulanka dadka deegaanka ku weheliyey maamulka Jobbooyinka oo uu horkacayo Shiikh Axmed Madoobe.
Shirka waxaa furey Axmed Madoobe waxaana uu sheegay in wakiilo ka socda dadka dega goboladaas ay shirka ku dhanyihiin maantana waxa ay aaminsan-yihiin ay dawladda u gudbinayaan.
Sida Horseed Media heshay waxaa shirkaas ka hadley odoyaal gaaraya 10 oday kuwaas oo ay ka mid ahaayeen:
Suldaan Cali Siciid
Ugaas Adam Axmed
Cali Diirshe Danan
Adam Guule Shaale
Odoyaasha ayaa sheegay in wararka la faafiyey ee ah Jobbooyinka waxaa looga soo horjeedaa Dawladda Soomaaliya iyo wax la mida aysan ahayn kuwo jira, waxaan halkaan ku fadhinaa ayey yiraahdeen beelaha dega Jobooyinka oo dhan oo aysan cidi ka maqneyn, waxaan doonaynaa in saddexdaas gobol (labada Jubbo & Gedo) loo sameeyo maamul anaga ayaa isku raacsan, maamulkaas waxa uu ka mid yahay Dawladda federaalka ayey odoyaashu hadalkoodi isku raaceen.
Odoyaasha ayaa yiri waxaan diyaar u nahay haddii maamulkaas la dhiso in waajibaadka dawladda federaalka Soomaaliya ka soo baxno, ilaalino dastuurkii la dhigtey, Dawladdana waxaan uga fadhinaa in ay dhankooda ay na siiyaan xaqii aan ku lahayn.
Wasiiradii ka socdey dawladda federaalka oo kala ahaa Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga, wasiirka gaashaandhiga, wasiirka caddaaladda iyo wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in Kismaayo si wanaagsan loogu soo dhaweeyey isla markaana waxbadan oo wararkii soo baxayey ay ahaayeen kuwo la buun-buuniyey, waxaana ay isku raaceen dawlad ahaan in ay maanta aaminsan yihiin in maamulkaas aad rabtaan la dhiso, isla markaana la iska warqabo.
Labada dhinac ayaa isku waafaqey inta badan arrimihii ay ka wada hadleen.
Kulankii Madaxweynaha iyo Axmed Madoobe
Shirkan ayaa daba socdey shir qarsoodi ah oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku dhexmarey Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh AMxamuud iyo guddoomiyaha maamulka Jubbooyinka Shiikh Axmed Madoobe.
Sida HORSEED ka ogaatey xubno kamid ah maamulka Jubada hoose, Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud ayaa safarkii uu ku tegay dalka Kenya 21/12/2012 u gudbiyey dawladda Kenya in la qaatey nidaamka federaalka laakiin dadka Soomaaliyeed xiligan aysan u diyaarsaneyn, isla markaana loo baahan yahay in la gaarsiiyo heerkaas federaalka ah inta ka horeysana dawladdu dooneyso in maamulo kumeel-gaar ah ay gobolada u dhisto si federaalka loo gaarsiiyo.
Shirka dhexmarey Madaxda Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyod alka Kenya ayaa xoogiisu ahaa khilaafka ka taagan dhisidda maamul goboleedka Jubbaland taas oo Madaxweynuhu ahaa mid si weyn uga soo horjeeda doonaayeyna in marka hore gobolada uu maamulo u magacaabo kadibna loo diyaar garoobo federaalka.
Dawladda Kenya ayaa markii Madaxweynuhu ku adkeystey mawqifkiisi ahaa in aan haddala dhisi karin maamulka saddexaas gobol go’aan ku gaartey in uu la hadlo Axmed Madoobe oo kamid ah dadka ay wax ka go’aan, beelaha halkaas degana metala. waxaa lagu keenay Diyaarad magaalada Nairobi.
Madaxweyne Xassan ayaa u gudbiyey taladii uu dalka Kenya u gudbiyey Axmed Madoobe waxaana uu soo jeediyey in uu Axmed Madoobe u magacaabayo Jubada Hoose isna aqbalo, inta federaal laga gaarayo, taas oo Axmed Madoobe ka diidey kuna adkeystey in dadka deeganaadaasi ay masiirkooda in ay ka taliyaan loo oggolaado.
Madaxweynaha Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markaas sheegay in uu wefdi u soo dirayo Kismaayo isla markaana talooyinkooda dhegaysan doono, taas oo ay isku waafaqeen Axmed Madoobe.
Wefdiga wasiirada ah ee Kismaayo tegey ayaa u sheegay bulshadii ay la shireen iyo maamulkaba in dhawaan madaxweynaha iyo raysalwasaaruhuba imaan doonaan Kismaayo si meesha looga saaro mad-madowgii jirey.
Lama oga in Madaxweynuhu ku adkeysan doono mawqifkii adkaa ee uu taagnaa ee kus aabsanaa in maamulka isagau soo magacaabo marka hore iyo in uu qaadan doono taooyinka la isku raacey ee Shirkii maalintii Jimacada ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo.
Dawladda Kenya waxay dagaal la gashey al-Shabaab oo muddo dheer ka talinayey Jubbooyinka, waxaana ay ciidankeeda oo garabsanaya kuwo Soomaaliyeed awood u yeesheen in magaalada ugu weyn Jubbooyinka ee Kismaayo isla markaana leh dekad ay ka qabsadaan al-Shabaab, tan iyo amrkaa waxaa Kenya iyo IGAD ku hawlanaayeen maamul us ameynta Jubbooyinka oo ahayd meel beeluhu ku hardamaan maamulkiisa, maamulkaas oo noqon doona dalad ay iska wada arkaan dhamaantood. Dawladda federaalka ayaa rintaas si weyn ud hibsatey isla markaana dacwado badan ka gudbisey.